Maxay yihiin barnaamijyada ugu wanaagsan ee IDE-yada loogu talagalay GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Maxay yihiin barnaamijyada ugu wanaagsan ee IDE-yada loogu talagalay GNU / Linux?
Carlos Gude | | Aplicaciones
Kuwa badan oo aan isticmaalno GNU / Linux waxaan u sameynaa inaan naqshadeynno ama barnaamij sameyno. Shakhsiyan waxaan u heellan yahay naqshadeynta websaydhka (Waxaan soo dhejin doonaa qaar ka mid ah shaqadayda) waana u maleynayaa Debian, waa qaybinta ugufiican ee hawshan tan iyo markii 2 ka mid ah 3 server ay isticmaalaan Debian ama xoogaa wax soo saar ah.
Waxaan sameyn doonaa isbarbardhig yar oo ka mid ah 3da aan aadka u isticmaalo iyo tan aan ugu jeclahay. Waxaan ku sameyn doonaa dhowr shuruudood oo lagu qiimeeyo 1 illaa 5:
Fududeynta isticmaalka: Waa maxay qalooca barashada ee IDE.
Waa lacag la'aan?
Aynu bilowno bilowga, mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan:
1. Qorrax madoobaad / Aptana:
Miisaan culus, siyaabo badan, ayaa loogu talagalay Java waayo, Java, laakiin la-u-habeyn la yaab leh, waxaad u isticmaali kartaa luqado kala duwan (Java, Python, Ruby, Android) iyo badalida jawiyada hal guji oo kaliya.
Muuqaal aad u badan, waad u habeyn kartaa illaa caajis. Waxay ku siinaysaa macluumaad badan oo ku saabsan fasallada (hababka iyo astaamahooda waxaa lagu arki karaa sanduuq), waad otomatayn kartaa shaqooyinka qaarkood, sida abuuritaanka Golayaal iyo Deggeneyaal.
Haddii aad isticmaasho xoogaa Framerwork, waad isticmaali kartaa dhammaystirka fasalka, otomatigga rakibidda iyo ka-helidda kombiyuutarka taliska isla IDE.
Isticmaalka fudud: 4 (Way fududaan kartaa, laakiin marka aad uhesho waxaad jeceshahay waa wax aad u fudud)
Isticmaal: 5 (Adeegso Java, oo in badan sheegaya)
Maaraynta: 5 (Daaqadaha illaa midabada calanka)
Waa lacag la'aan? : 100% Waad soo dejisan kartaa koodhka isha.
PD: Aptana, waa "nooc" qorrax madoobaad loogu talagalay naqshadeynta websaydhka, waxaa loo isticmaali karaa kudar ama barnaamij kale.
Iftiin, kakan oo waad u isticmaali kartaa jiir la'aan, laakiin foolxumo leh rabitaan. Waa HALKAN konsol, waad u isticmaali kartaa adiga oo aan lahayn jawi garaaf ah (oo aad ugu habboon in faylasha lagu saxo SSH), laakiin waa mid aad u adag in la isticmaalo, ma haysto menus oo way leedahay amarro badan, waxaad u baahan doontaa dhowr saacadood si aad ugu isticmaali karto si fudud.
Ma lahan is dhexgal toos ah Qaab-dhismeedka, iyo sidoo kale GIT mana la mid ah (madoobaad y Qoraal Fudud 2 haa) marka loo eego, ma lahan geed buugga wax lagu qoro, ama wax kasta (oo nooc cabsi leh ah, laakiin mar alla markii aad ogaato waxaad sameyneyso, waa wax aan loo baahnayn).
Sideedaba, qabashadu waa aniga VIM, Waxaan u leeyahay si bareer ah (Kaliya waxaan kiciyey ikhtiyaarka si loo muujiyo xarfaha)
Isticmaalka fudud: 1 (Iskuday ahaan kali ahaan)
Isticmaal: 0 (Lama ogaan karo)
Maaraynta: 3 (Waa inaad wax ka bedesho feylka vimrc waxaadna ku dari kartaa waxyaabo badan, laakiin waa inaad ogaataa waxaad taabato)
Bonus: Qaabeyntii ugu dambaysay ee VIM qadarinteeda Duqa magaalada Alexander.
3. Qoraalka Sare 2:
Ku saleysan vim, kaas oo ay ka dhaxasho muuqaalkiisa (markaad furto hadda rakibay), qaabeyntiisa (waxay ka dhigeysaa mid muuqaal leh, laakiin sidoo kale xoogaa adag inkasta oo aysan u badneyn VIM) iyo isticmaalkeedu hooseeyo, wuxuu ku shaqeyn karaa mashiin kasta, da'da uu doono ha lahaadee.
Laakiin waxa fiican ee arrintan ku saabsan HALKAN waa laqabsashadeeda, waxay samayn kartaa waxaad rabto, waxaad leedahay macros, waxaad leedahay jeexjeexyo, waxaad leedahay qaabka zen, calaamado badan iyo waxa ugu fiican, waad isticmaali kartaa jiirka la'aan.
Waxay hadda tahay gabadha quruxda badan HALKANs, maxaa yeelay waxaad u isticmaali kartaa luqadaha oo dhan, dhammaantood FW iyo xitaa dhammaan hiwaayadahaaga barnaamij ahaan.
Isticmaalka fudud:3 (Iskudhufsan, laakiin ka sii dhawaansho badan VIM)
Isticmaal: 1 (Wax ka badan VIM, laakiin aan la aqbali karin)
Maaraynta: 4 (Waa inaad wax ka bedesho feylka vimrc waxaadna ku dari kartaa waxyaabo badan, laakiin waa inaad ogaataa waxaad taabato)
Waa lacag la'aan? : 50% Ma soo dejisan kartid lambarka isha, waa la bixiyaa laakiin waad u isticmaali kartaa adigoon bixin adigoon xaddidnayn (ka saar fariinta soo baxaysa X kasta)
Marka la soo koobo, HALKANHaa, sida wax walba oo noloshan ah, waxay kuxirantahay midkasta, shaqsiyan waxaan u isticmaalaa seddexda, mid walboo shay kasta, VIM Waxaan u isticmaalaa sida jaranjarada (kaalay, inaad wax ka bedesho 4 shay ama aad u tafatirto feylasha qaabeynta) iyo Aptana y ST2 loogu talagalay mashaariicda naqshadeynta websaydhka.
Taladayda doorashada wanaagsan HALKAN? Iskuday, isbarbar dhig hadaad wax kafiican kaheshona hayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maxay yihiin barnaamijyada ugu wanaagsan ee IDE-yada loogu talagalay GNU / Linux?
Runtii waan jeclahay Sublime Text, interface fiican oo leh qalab badan.
Ku jawaab Rogergm70
Hagaag, waxaan u maleynayaa cinwaanka boostada, inaad ula jeeddo IDE-yada kuugu fiican adiga .. sax ma tahay?
Hadda waxaan bixin doonaa tabarucaadayda. Marka horeba, ma aanan ogeyn in VIM uu yahay IDE, iyo in Qoraalka Sare uusan ku dhisneyn O_O sidoo kale. Text Sublime wuxuu horey ugujiray nooca 3, oo hada la tijaabin karo dhibaato la'aan 😀
Haddii aad i weydiiso, horumarinta webka dhowr codsi ayaa ka maqnaa liiska:
- iyo kuwo kale.
Gaar ahaan Qaabdhismeedka ayaa ah kan aan aad u adeegsanayo beryahan. Miyaad horeba isku dayday? Waan kugula talinayaa 😀
Waxaan u isticmaalaa netbeans-ka sida ugu habboon ee aan ku isticmaali karo bakhaarkayga riix 🙂
Ku jawaab beny_hm
Carlos Gude dijo
Vim waa tifaftire qoraal ah, laakiin waxaad u adeegsan kartaa IDE ahaan, (sida buugaagta yar yar iyo xitaa warqadda gogosha waxay noqon kartaa IDD xD wanaagsan)
Sida iska cad waa ra'yigayga mana aanan dhigin wax intaa ka badan maxaa yeelay hadii kale waxay ku dhowdahay in la qoro buug duugoobi doona isla marka uu dhamaado, ma ogi haddii aad i fahantid xD
Ku jawaab Carlos.Gude
Elav run ah. Waxaan isku dayay bluefish, laakiin waxaan ku dhegay Bluegriffon.
Waxaan inbadan tijaabiyay Codelite waxayna umuuqataa inay IDE fiican tahay sidoo kale 🙂
Qaansooyinka waxaan ku jeclahay horumarintiisa tooska ah, haa, waa mid aan xasilloonayn markaad wax ka beddelayso wax aan ahayn css.
Rodrigo Qarsoodi dijo
Ammm Waxaan u maleynayaa inay tahay wax gaaban, laakiin si kastaba ha noqotee
Maqaal hore ayaan sameeyay
Iska hubi waxaa laga yaabaa inaad ballaadhiso dhinacyadaada
Jawaab Rodrigo Satch
Waxaan u maleynayaa inaad ka tagtay qaar ka mid ah liiskaaga, waxaa jira jahwareer u dhexeeya waxa bilaash iyo bilaash ah, sidoo kale Android maahan luqad.
Wax aan jeclaan lahaa inaan akhriyo waxay ku saabsan yihiin xirmooyinka sharafta leh, inbadan oo ka mid ah waa bilaash waxayna ku daraan hawlo aad u wanaagsan.
Anigu waxaan ahay isticmaale Archlinux ah iyo barnaamijiye C kuwa aan aad u jeclahayna waa Netbeans, Monodevelop iyo Sublimetext.
Netbeans-ku aad buu u culus yahay laakiin waxaad ka dooran kartaa isku-duwaha kuwa aad rakibtay.
Monodevelop waa mid aad u fudud oo aan laheyn aragti badan oo muuqaal ah laakiin waxay ku fashilantay burburka qoraalka waxayna kaliya ku shaqaysaa gcc.
Sublimetext culeyskiisu waa yar yahay, wuxuu cunaa wax badan oo xusuusta Super ah oo la isku haleyn karo laakiin waxay u baahan tahay waqti si xoog looga helo.
Waxaan si joogto ah u isticmaalaa Monodevelop.
Haddii aan ka hadalno tifaftireyaasha fidsan iyada oo aan la sii ambo-qaadin, in kasta oo ay tahay in aan qirto in emacs ay leedahay soo jiidashadeeda, gedit had iyo jeer wuxuu ahaa oo wuxuu noqon doonaa dookhayga.
Ku jawaab Xoslorg
Waan ku biirayaa!
wali ma jiraan wax IDE ah oo ka batay awooda Emacs
Ku jawaab plex
Waqtigan xaadirka ah waxaan sameeyaa dhammaan ilaaliyeyaashayda anigoo adeegsanaya Qaansooyinka iyo Eclipse PDT, laakiin weli waxaan mararka qaar seegaa fudaydka ay Dreamweaver haysatay - ama ay leedahay - in lagu saxo faylasha fog http://FTP...
Waxaan isticmaalaa GEANY weyna ii shaqeysaa aniga.
Fool xun VIM? VIM waa nuugid 🙂
Waxaan u isticmaalaa kate, si aan u barto qoraalka bash iyo c / c ++
Qoraal sare 2 50% lacag la'aan? Warkii ugu horeeyey.
Shakhsiyan c iyo c ++, waxaan ku dhajiyaa qtcreator illaa iyo hadda.
Waxaan u maleynayaa in dhowr kale la waayey.
Anjuta xitaa lama sheegin?
Waa hagaag, ma jiraan wax IDE ah oo loogu talagalay Linux. Marka hore, ka gudub qoraalka Sublime, waa kan ugu fiican laakiin wuxuu xadidayaa liisankaaga. Waxaan kala saaraynaa IDE-yada iyo Tifaftirayaasha, isku mid ma aha.
Hadda liis yar:
-Netbeans-ka, ha ka hinaasin wax qorrax madoobaadka ah, laakiin waa culus yahay. SDI
-Khariidaynta naqshadeynta garaafka ee c, cc ++. SDI
-Hormarinta naqshada Mono (.Net). SDI
-Lazarus oo loogu talagalay naqshadeynta FreePascal (sida Delphi). SDI
Luqado badan oo badan iyo miisaan fudud. Tifatiraha
Luqadaha kala duwan ee Anjuta iyo miisaan fudud. Tifatiraha
-QTCor-abuuraha C ++ oo leh QT. SDI
-Gedit leh plugins. Luqado badan Tifatiraha
-Code: Blocks loogu talagalay c, c ++. SDI
-wxFormBuilder mabda 'ahaan c, c ++, laakiin wuxuu abuuraa isdhexgal garaaf ah luqado kala duwan adoo adeegsanaya wxWidgets. SDI
-jEdit tifaftiraha luqadaha badan oo ku saleysan java aad uga fudud kan Eclipse ama Netbeans
Poof, iyo qaar kaloo badan. Waxaan ka tagay Python (oo ay wadato IDE Eric) iyo luqado kale oo aan jidka ku sii jiro.
Waa liis yar, waxaa jira wax bixin iyo qaadasho.
Sharaxaad wanaagsan, waxaan sidoo kale ogaaday in qoraagu si aan kala sooc lahayn isugu dhafay tifaftirayaasha qoraalka horumarsan iyo IDEs.
Shuruudo noocee ah ayaad raacaysaa si IDE looga duwo tifaftiraha? Waa tan waxaan u tixgeliyaa Anjuta iyo Geany inay yihiin IDE, ma ahan kuwa daabaca, mana ogi sababta aysan u noqon doonin.
Vim FTW !!!
Anigu waxaan ahaa isticmaale qorrax madoobaad muddo dheer, laakiin markii aan bilaabay inaan waxbadan ka faa'iideysto Vim, waxay ahayd inaan gartay inta jeer ee aan ku lumiyay IDE-gaas, laakiin Vim, waxaad runtii dareemeysaa powa xD
Waa u qalantaa inaad waqti geliso VIM (taas oo aan sidaa u sii xumeyn), markaa waxaad sameyn kartaa waxyaabo yaab leh. Iyada oo la adeegsanayo fiilooyin (waxaa jira tiro aad u tiro badan) iyo qaabeynta '.vimrc' waa IDE aad u dhameystiran oo fudud.
Jawaab Chuck Daniels
Waxaan kugula talin lahaa Gambas, tani waxay u oggolaaneysaa isla lambarka si loogu abuuro barnaamijyo Linux ah Deb iyo RPM, Mac OS X iyo Windows ...
Beddelkiisa gaarka ah waa Real Basic, oo hadda loo yaqaan Xojo, waa bilaash demo ahaan.
Waxaan isku dayay fikrado kala duwan mana aanan dhameynin waxaan jeclahay midkoodna, kaliya waxaan soo bandhigayaa dhagaxaan. Ma gaaro heerka sare maxaa yeelay ma ahan lacag la’aan wax aan xor aheynna uma qalmo wax taageero ah.
Laakiin iPod leh iOS ayaa mudan in la taageero? LOLAZO
Jiritaan hore wuxuu ahaa iPod leh macruuf marka aan ku faraxsanahay, GNU kadib waa ciqaab aan quudhsado laakiin waxaan ahay faqiir iyo shaqo la'aan sidaa darteed waan hayn doonaa ilaa aan ka badalayo wax keenaya, tan iyo android Uma arko wanaag ama bilaash.
Marka hore iyo muran la'aan Vim 😀
Waan jeclahay qaabka guud ee boostada, waxa kaliya ayaa ah in, sida qaar halkan ku dhahaan, waxay ahayd mid gaaban.
Emacs ayaa ugu fiican.
Emacs, waad dhaaftay midkaas. IDE-ku wuxuu leeyahay nolol u gaar ah, wuxuuna jiray illaa 70-maadkii.
Adoo jidka ag jooga, maxaa ku dhacay casharkii Emacs? Aad bay u wanaagsanayd.
Shaki la'aan waxaad ka maqantahay midka ugu fiican, Geany weyn.
Jawaab to yeiij
Waxaan horeyba kuugu sheegay dhowr jeer, waxaan lajoogaa Geany oo leh waxa kaliya ee aniga muhiim ii ah, majiro waxqabadyo dheeri ah ama waxyaabo dheeri ah oo kujira oo cuna kheyraad badan (wax aan ka necbahay Eclipse anigoon sii dhaafin)
Waxaan u isticmaalaa bogagga shabakadda, Phonegap / Cordova, Python iyo waqtigan xaadirka ah si aan ugu horumariyo cayaaraha hal-abuurka Zx Spectrums.
Xilligan waxaan ku toogtaa geany, wixii aan u baahanahay waa wax weyn
guud ahaan, shabakadda iyo qoraalka waxaan u isticmaalaa Geany. Waa waxa ugu dhow ee allaha awooda leh 'Notepad ++' ee aan ka helo Linux.
Markaa tafatirka fog waxaad ku dhameyneysaa adigoo isticmaalaya VIM haa ama haa, waa maxay xanuunka dameerka markii daahitaanku kaa horyimaado, laakiin waa inaan qiraa in kuwa yaqaana sida loo isticmaalo runtii si fiican ula fajacaan.
Runtii miyaad u malaynaysaa inay VIM fool xun tahay? Taasi waxay kuxirantahay inta jeer ee ay u heellan tahay qaabeynteeda, halkan waxaan ku dhejinayaa shaashadda qaabeynta VIMkeyga, umaba muuqato wax cabsi leh aniga all
Waxaan leeyahay DEFAULT waa wax fool xun. (i sii gudbi qaabeyntaada fadlan !!!!!)
Aan aragno, sida iska cad waxaan ka hadlayaa oo keliya IDE-yada aan adeegsaday, laga yaabee inaan ku caddeeyo maqaalka
Waxaan adeegsaday mowduuc la yiraahdo kolor (https://github.com/zeis/vim-kolor), iyadoo lala kaashanayo shirkadda vim-airline (https://github.com/bling/vim-airline). Kadibna waxaan adeegsadaa waxyaabo badan oo fiilooyin ah, oo ay ku jiraan mid loogu talo galay dulqabeyaal badan, guntin loogu talagalay luqadaha aan la shaqeeyo (Python with Django, Bash ...), in kastoo tani ay tahay oo keliya 'cirifka barafka'.
Goor dhow waxaan maqaal ku sameyn doonaa degelkeyga oo ku sheegaya sida aan u qaabeeyey VIM. Markaan diyaar noqdo waan kula soo xiriiri doonaa. 🙂
By the way, hambalyo bogga, waxaan ahaa akhristaha FromLinux iyo Aan u isticmaalno Linux dhowr sano (laga yaabo in ka badan), iyo midowga labada wesites waxaa hadda jira macluumaad badan oo wanaagsan oo laga soo ururiyay webka. Waad ku mahadsantahay shaqada baaxada leh ee aad qabato.
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan rabaa inaan halkaan ku milicsado ra'yigayga hooseeya ee ku saabsan qoraalada qaar ee la daabacayo, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inaan wax badan dhexda u dhigo qoraalada, si aan uga fogaado daabacaadda qoraallada sidan oo kale ah, kani waa qoraal aan umuuqan mid ka yimid Linux, horeyba waxaa u jiray dhowr dhaji markaa habka aan wax u arko, waxay hoos u dhigayaan tayada waxyaabaha ku jira goobta.
Cafiskeyga Elav, KzKgGaraa iyo UsemosLinux .. laakiin u furitaanka bulshada waxay u horseedaa alwaax firfircoon si loo ilaaliyo tayada ugu yar ee ka kooban goobta.
Waxaan horeyba u arkay qoraallo dhowr ah sida "Linuxeando Windows" oo aan la socon mowduuca baloogga, oo aan lahayn qoraal wanaagsan, oo aan lahayn ujeedo cad, tanna dhanka kale waa gebi ahaanba ra'yi, sidoo kale iyadoon lahayn aasaas farsamo wanaagsan iyo khaladaad kala duwan leh (ma xusi doono).
Tan, waxa aan doonayo inaan ku gaadho ayaa ah inay ku sii adkaystaan ​​qoraalada la daabacay, maaha inay albaabadooda ka xidhaan bulshada (anigu qayb baan ka ahay), laakiin waxay kaliya isku dayaan inay sare u qaadaan heerarka Ku ilaali tayada saddexda maamul ee looga bartay.
Waxaan rajeynayaa inaanan cidna dhibin waa ra'yigayga waxaanan ahay aqriste joogto ah bulshadaan cajiibka ah.
Waad saxnaan kartaa, runtiina dad badani si isku mid ah ayey u fikiraan, laakiin sidee qof ugu sheegi kartaa in tabarucaaddooda suubban "tayo lahayn"? Waa wax aad u fool xun in sidaa la sameeyo, sida in badan oo ka mid ah dadka ka qayb qaata ay ku sameeyaan sida ugu fiican ee ujeedadu tahay.
Faalladaada wax kuma dhibeyso, lidkeed waa la qadarinayaa 😉
Waan fahansanahay gebi ahaanba Elav, waan jeclahay sida bulshadu wax ugu darsato, laakiin waa in la ogaadaa in tabarucaadu ay ahaato "Ku darsiga", waxaana jira kuwa badan oo aan ahayn, oo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u lumay, wax had iyo goor horseedda dagaal olol. Hadda haddii fikradaha ay ahaayeen kuwo adag oo qaas ah sida kuwa @diazepan waa la fahmi lahaa.
In kasta oo runta jagadaadu ay adag tahay in la diido bulshada noolaynaysa, markaa waxaan u malaynayaa in nidaam loo sameeyo si loo dhiirrigeliyo tayada waxyaabaha la soo saaray, sida "waxtarka ugu wanaagsan ee bisha", "barashada ugu fiican", wax ku dhiirrigeli tifaftirayaasha inay horumariyaan.
Salaan iyo mahadsanid akhriska ra'yigayga.
Waad ku mahadsan tahay, waxaad isiisay fikrado aad u fiican 😉
Waxaan isticmaalaa PyCharm (bilaash maahan ama wax la mid ah) laakiin waan ku qanacsanahay.
Waxaan nahay 2 saaxiibo, inkasta oo aysan sidaa u cusleyn :(, laakiin waan jeclahay Fikradda aniga fikirka ugu fiican ee Python xitaa haddii ay tahay mid lahaansho leh.
Waxaan u maleynayaa in netbans-ka ay ka awood iyo fudeyd badan yihiin isticmaalka qorrax madoobaadka si aan si fiican uga dhigo 😀
Maaddaama aanan ahayn barnaamijiye, waxaan la baashaalay Laasaros, Bilaashka Pascal RAD ee labadaba Windows iyo Linux, marka laga reebo xaqiiqda ah in 'Free Pascal' ay iga dhakhso badan tahay inaan ordo marka loo eego GCC, waxay la mid tahay haysashada xarunta Visual Basic ee la neceb yahay laakiin isku dhufashada badan.
IDE-ka kale ee aan isticmaalo waa Geany
Jawaab ku siiso renco
Hagaag, kuwa aan ugu isticmaalo shabakada waa:
Sublimetext - Tifatiraha
Qaamuusyada - Tifatiraha
Horumarinta arjiga ee GUI:
Qorrax madoobaad - IDE (loogu talagalay Python iyo Ruby)
Gambas3 - IDE (Mid ama barnaamij kale oo aasaasi ah)
IDE: jawiga horumarka isku dhafan IDE waa inuu noqdaa tifaftiraha noocan oo kale ah, qalabka wax lagu shubo iyo qalabka otomaatiga ah (isku soo ururinta, baakadaha, iwm.) Ha u qaadin si qaldan laakiin VIM ama SublimeText uma maleynayo inay yihiin IDEs Haddii waxay noqon karaan tafatirayaal aad u wanaagsan, inkasta oo aad ku dari kartid isku dubaride iyo wax baabi'iya iyaga, IDE-da noqonaysa noocaas waa inay la yimaadaan aaladahaas bilowga. Marka laga soo gudbo rabitaankaaga wanaagsan ee shaqadaada, oo ah mid aad u wanaagsan, waxaad jahwareerinaysaa kuwa hadda bilaabaya barnaamijka. Ogaanshaha shay kasta waxa uu yahay iyo fursadaha ay haystaan ​​ayaa aasaas u ah mid walba inuu raadiyo hadba baahida, raaxada iyo dhadhanka shaqsiyadeed ee xulashada ugu fiican marka la horumarinayo
Waxaan u maleynayaa inuu jiro jahwareer halkan:
Text Sublime (kaas oo horey ugujiray nooca 3) iyo Vim maahan IDE, waa Editors Text. Way ka duwan tahay: halka IDE-ku uu leeyahay aalado lagu tijaabiyo, lagu soo uruuriyo iyo in ka badan, tifaftiraha qoraalka ayaa kaliya loogu talagalay qorista (sida magaciisu sheegayo) qoraal iyo lambar.
Taasi waa la nadiifiyay, liistada IDE-yada iyo tifaftirayaasha aan jeclahay:
- Dev C ++ (Windows, kaliya loogu talagalay C ++) (Bilaash, lahaansho)
- Koodh :: wuxuu xannibayaa IDE (Multiplatform, oo loogu talagalay C ++ oo loo adeegsan karo barnaamijyada kale) (Furan)
- Nano: Tifatiraha xarfaha, aad ufudud (Furan)
- Qoraalka Sare (3)
- Visual Studio Code (Multiplatform) (Furan, in kasta oo uu yahay M $)
Jawaab Raúl Fernández
Sida loo ilaaliyo dukumintiyada LibreOffice
Waa maxay? Xidid, sudo, iyo kuwa kale ...